ဖုန်းဟမ်းနေတာကို မြန်အောင်လုပ်မယ် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ဖုန်းဟမ်းနေတာကို မြန်အောင်လုပ်မယ်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 5:07 AM Android Tutorial, Tutorial, နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
ဖုန်းသုံးနေရင်း နှေးသွားတာ ပွတ်မရတာ App တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တာ စတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံလာရပြီဆိုရင် အနည်းငယ်တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဖုန်းလေးကို ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး သုံးရတာ မြန်ဆန်အောင် ဒီအဆင့်လေးတွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖုနျးသုံးနရေငျး နှေးသှားတာ ပှတျမရတာ App တှေ ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတာ စတဲ့ ပွဿနာတှေ ကွုံလာရပွီဆိုရငျ အနညျးငယျတော့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈရပါတယျ။ ဖုနျးလေးကို ပေါ့ပါးသှကျလကျပွီး သုံးရတာ မွနျဆနျအောငျ ဒီအဆငျ့လေးတှေ လုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
1. Space တွေ အနည်းငယ်ရှင်းထုတ်ပါ။
ဘယ်ဟာတွေက Storage များနေလဲ။ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တာတွေက နေရာယူထားလား ဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ မလိုအပ်သည်များကို clear လုပ်ပစ်ပါ။
1. Space တှေ အနညျးငယျရှငျးထုတျပါ။
ဘယျဟာတှကေ Storage မြားနလေဲ။ ကိုယျ့ဖုနျးမှာ မလိုအပျတာတှကေ နရောယူထားလား ဆိုတာ စဈဆေးပါ။ မလိုအပျသညျမြားကို clear လုပျပဈပါ။
2. Widgets နဲ့ Shortcuts တွေ ဖယ်ပစ်ပါ။
အသုံးပြုရတာ လျင်မြန်လွယ်ကူဖို့ Widgets တွေနဲ့ Shortcuts တွေကို ဖုန်းထဲ ထည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သင်သိပ်မသုံးဖြစ်တာမျိုးဆို delete လုပ်ထားပါ။
2. Widgets နဲ့ Shortcuts တှေ ဖယျပဈပါ။
အသုံးပွုရတာ လငျြမွနျလှယျကူဖို့ Widgets တှနေဲ့ Shortcuts တှကေို ဖုနျးထဲ ထညျ့တတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ သငျသိပျမသုံးဖွဈတာမြိုးဆို delete လုပျထားပါ။
3. မလိုအပ်တဲ့ Animation တွေ လျှော့ပါ။
သင်သုံးတဲ့ Launcher ပေါ်မူတည်ပြီး Preference နဲ့ Animation ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ဖုန်းရဲ့ Storage မှာ နေရာ အတော်လေးယူပါတယ်။
3. မလိုအပျတဲ့ Animation တှေ လြှော့ပါ။
သငျသုံးတဲ့ Launcher ပျေါမူတညျပွီး Preference နဲ့ Animation ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ ဒါတှကေလညျး ဖုနျးရဲ့ Storage မှာ နရော အတျောလေးယူပါတယျ။
4. App တွေကို ပိတ်ပါ။
Background Running Apps တွေကို Clear Up လုပ်ပြီး ဖုန်းကို Clean လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ Clean လုပ်ပေးတဲ့ Software ရှိရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
4. App တှကေို ပိတျပါ။
Background Running Apps တှကေို Clear Up လုပျပွီး ဖုနျးကို Clean လုပျပေးဖို့ လိုအပျပါမယျ။ Clean လုပျပေးတဲ့ Software ရှိရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။
5. Restart ချပါ။
အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးကတော့ Restart ချတာပါပဲ။ ဖုန်းထဲက မသုံးတော့တဲ့ App တွေကို Setting ထဲဝင်ပြီး Clear Data လုပ်ပေးရင် ဖုန်းသုံးရတာ ပိုမိုလျင်မြန်လာပါလိမ့်မယ်။
5. Restart ခပြါ။
အမွနျဆုံးနဲ့ အလှယျဆုံးကတော့ Restart ခတြာပါပဲ။ ဖုနျးထဲက မသုံးတော့တဲ့ App တှကေို Setting ထဲဝငျပွီး Clear Data လုပျပေးရငျ ဖုနျးသုံးရတာ ပိုမိုလငျြမွနျလာပါလိမျ့မယျ။
ဖုန်းဟမ်းနေတာကို မြန်အောင်လုပ်မယ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:07 AM Rating:5ဖုန်းဟမ်းနေတာကို မြန်အောင်လုပ်မယ်။ ဖုနျးဟမျးနတောကို မွနျအောငျလုပျမယျ။ ဖုန်းသုံးနေရင်း နှေးသွားတာ ပွတ်မရတာ App တွေ ကောင်းကောင်းအ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:07 AM
Samsung ဖုန်းများအတွက် All In One မြန်မာဖောင့်ဆော့ဝဲ